ဘဝမှတ်တိုင်: ဓါတ်ပုံတွေ ကိုအပျော် သဘောနဲ့ ရုပ်ပြောင်တွေလုပ်ဖို့ Faces - Photo Fun
ဓါတ်ပုံတွေ ကိုအပျော် သဘောနဲ့ ရုပ်ပြောင်တွေလုပ်ဖို့ Faces - Photo Fun
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို အပျော် အပျက် သဘောနဲ့ စလို့နောက်လို့ ရတဲ့ appl လေးပါ
မျက်နှာပေါ်မှာ မျက်မှန်တို့ နှုပ်ခမ်းမွှေးအတု တပ်တာတို့ လုပ်လို့ရပါတယ်။
အပိုတခု့ အနေနဲ့ ဦးထုပ်တလုံးလည်း ထပ်တပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ ပျော်ရင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ
Faces for Android Have fun with your photos. Selectaphoto and Faces will find faces within your photo and allows you to easily placeaselection of hats, glasses and beards over the faces of your friends and family Once you have added the effects to your photo you can save the photo, or easily share the photo with you friends. The photo should have clearly identifiable faces or the app may not find faces within the photo. The application will work best if your photo is medium sized (e.g. 800x600 photo).
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/12/2014 11:27:00 pm